Kenya oo fasaxdey duulimaadyada 130 dal iyo shuruudo ay ku xidhey – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya oo fasaxdey duulimaadyada 130 dal iyo shuruudo ay ku xidhey
Kenya oo fasaxdey duulimaadyada 130 dal iyo shuruudo ay ku xidhey
Dowlada Kenya ayaa Arbacadii sii deysay liisaska casriga ah ee wadamada iyo dhulalkooda oo muwaadiniintooda / dadka safraya aan lagu qasbi doonin muddo 14 maalmood ah oo karantiil ah kadib markii ay soo galeen diyaarada caalamiga ah.
Liiska ay wadaagaan Hay’adda Duulista Rayidka ah ee Kenya waxaa ku jira 130 dal oo ay ku jiraan dhammaan waddamada Bariga Afrika marka laga reebo Tansaaniya.
Wadamada kale ee Afrikaanka ah ee liiska ku jira waxaa ka mid ah Namibia Morocco, Ethiopia, Seychelles, Eritrea, Gambiya, Mauritius, Tunisia, Egypt, Libya, Botswana, Zimbabwe, Djibouti, Lesotho iyo Angola.
Wadamada kale ee liiska lagu soo daray waxaa kamid ah Talyaaniga, Masar, Imaaraadka Carabta, Singapore, Mareykanka (marka laga reebo California, Florida iyo Texas) iyo Thailand kuwa kale.
Rakaabka oo dhan waxaa looga baahan yahay inay soo saaraan PCR-ga COVID-19 ee ku saleysan caddeynta muujineysa caddeynta ah in uu sameeyay baaritaan gudaha 96 saacadood kahor safarka.
Rakaabku sidoo kale waxaa looga baahan doonaa inaysan tusin heerkulka jirka oo ka sarreeya 37.5 ° C (99.5 ° F) ama yeeshaan qufac joogto ah, neefsashada oo dhib ah ama astaamo kale oo u eg ifilada.
Kenya ayaa cirka u furtay duullimaadyada caalamiga ah 1-da Ogosto ka dib markii ay hakisay duullimaadyadii bishii Maarso iyada oo kaliya xaalad degdeg ah iyo xamuul loo oggol yahay inay shaqeeyaan.
Previous articleSiddeed Shuruudood oo Lagu Xidhay Cidda u istaagaysa Kuraasta ugu sarraysa xisbiga KULMIYE
Next articleتصدر كينيا قائمة محدثة بالمسافرين من الدول المعفاة من الحجر الصحي
Trump oo mar kale xasuusiyay ISIS .. “Ha u ogolaanin inay...
Duqa Degmada Borama oo ka Hadlay Askari la Toogtay Xili uu...